Berbera oo Gaadiidka Bajaajta laga ururiyey, Wadayaashooda oo Xabsiga la dhigay iyo Sababta keentay | Ogaalnews	CIMILLADA HARGEYSA
Berbera oo Gaadiidka Bajaajta laga ururiyey, Wadayaashooda oo Xabsiga la dhigay iyo Sababta keentay
TweetBerbera, 28 May, 2012 (Ogaal)- Gaadiidka yar-yar ee Bajaajta ayaa laga ururiyey magaalada Berbera, isla markaana waxa Xabsiga loo taxaabay Wadayaasha Tigta tiro ka mid ah, ka dib markii Ciidamada nabadgelyada waddooyinku olole xooggan shalay subax ku qaadeen jidadka iyo istaammada gaadiidkaas ee magaaladaas.
Taliyaha Ciidanka nabadgelyada waddooyinka ee Laanta magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil, ayaa faahfaahin ka bixiyey hawlgal ciidanka nabadgelyada waddooyinku shalay ku qabqabteen Gaadiid badan oo ka tirsan kuwa loo yaqaanno Tigta (Bajaaj), taasoo sida Basaska ama Baabuurta Tagaasida ah uga dhex shaqeeya magaaladaas, iyada oo tiro badan oo gaadiidkaas ah iyo wadayaashoodii-ba Xabsiga loo taxaabay.
Taliyaha Ciidanka nabadgelyada waddooyinka ee Berbera Jaamac Ismaaciil Cali, ayaa Saxaafadda u sheegay shalay sababta keentay xadhigga gaadiidka Bajaajta iyo Wadayaashooda, iyada oo Berbera ka mid ah magaalooyinka ay gaadiidka Tigta loo yaqaanno aadka looga isticmaalo. Waxaanu Taliyaha ciidanka nabadgelyada waddooyinka ee Berbera Jaamac Ismaaciil, waxa uu sheegay inay wadayaasha gaadiidku inta badan aanay ku dhaqmin sharciga waddo marista gaadiidka, isla markaana aanay buuxin shuruudaha kala iibsiga Baabuurta iyo Tigta Tagsi ahaanta loo isticmaalo.
Taliyaha oo arrintaa ka hadlayaana waxa uu yidhi; “Tigtu waxay noqotay gaadiid bulshada dhexdeeda ku cusub oo tayo leh, dhibaatana leh. Waxa laga yaabaa inay qaarkood marayaan dhawr gacmood oo illaa shan gacmood (shan qof) kala iibsadeen, kii u horreeyeyna magiciisu ku qoran yahay iyo sawirkiisu, waana arrin aan loo baahnayn oo sharciga xaaraan ku ah. Waxaad mooddaa inay nidaamkii sharciga waddo marista ay fawdo ku soo kordhiyeen Bajaajtu.”
“Waxa ka daran marka uu dhaco ama shil galo ee uu dhaawac iyo dhimasho geysto wadihii Tigtu kaligii ayaa la cararaya, arrintaasina waa fawdo iyo sharci-darro, dadkana waxa loo baahan yahay in sharciga iyo nidaamka lagu soo dabbaalo.” Sidaa ayuu yidhi Taliyaha ciidanka nabadgelyada waddooyinka magaalada Berbera Jaamac Ismaaciil Cali.
Taliyaha ayaa soo jeediyey in dadka gaadiidka kala iibsadaa samaystaan kala wareejin hadday Tig tahay, hadday Tagaasida tahay iyo hadday Baabuurta waaweyn yihiinba, waxaanu xaaraan iyo sharci-darro ku tilmaamay in qofkii ugu horreeyey ee gaadhiga laga iibsaday Buugga gaadhiga uu ku qornaado magiciisa iyo Sawirkiisu, arrintaas oo cidda lagu qabto uu sheegay inay ka dhigi doonaan nooca uu doono ha ahaado ee gaadhiga uu wato illaa inta uu sharciga buuxinayo.
“Haddaad qof gaadhi ka iibsato oo aad magiciisii iyo sawirkiisii ku wadato, arrintaasi waa xaaraan, gaadhiga aad iibsatay adiga ayaa leh ee waa inaad sharciga buuxisa, qofka doonaya inuu sawir kale iyo magac kale ama gaadhi ha noqdo ama Tig ha noqdo’e qofka aannu ku qabanno arrintaa waannu ka dhigaynaa illaa inta uu sharciga marayo.”
Si kasta oo ay tahayba maaha markii ugu horreysay ee ciidanka nabadgelyada waddooyinku sidan oo kale Xabsiga u taxaabo gaadiidka Bajaajta loo yaqaanno iyo wadayaashooda, hase-yeeshee, magaalooyinka Boorama, Burco iyo Berbera lafteeda oo ah saddexda magaalo ee sida wayn looga isticmaalo Gaadiidka Tigta ayey marar kala duwan oo hore sidan oo kale Xabsiga looga buuxiyey, kuwaas oo had iyo jeer ay ciidanka ammaanka iyo kuwa nabadgelyada waddooyinku ku eedeeyaan ku dhaqanka tallaabooyin sharciga baal-marsan.
Si kastaba ha ahaatee, Gaadiidka Bajaajta ee Tigta loo yaqaanno, ayaa saddexdii sano ee ugu dambeeyey istcimaalkoodu aad ugu soo badanayey magaalooyinka waaweyn ee Somaliland, gaar ahaan saddexdaa magaalo ee Berbera, Burco iyo Boorama oo aan lahayn Basaska dadweynu u isticmaalo inay u kala raacaan qaybaha Suuqyada iyo Xaafadaha kala duwan ee magaalooyinkaas.